Saudi Arabia yakasimbiswa sePamutemo Partner Nyika yeITB India 2021
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Saudi Arabia Kuputsa Nhau » Saudi Arabia yakasimbiswa sePamutemo Partner Nyika yeITB India 2021
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • India Kupwanya Nhau • Musangano Weindasitiri Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • Saudi Arabia Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
ITB India neSaudi Tourism Authority inozivisa kubatana kwakabatana
Iyo yekutanga ITB India Virtual Chiitiko, ichiitwa musi wa7 - 9 Kubvumbi 2021
Saudi Tourism Authority ine basa rekusimudzira kuziva nezve Saudi, iyo chaiyo imba yeArabhiya, senzvimbo yekuenda
Saudi Tourism Authority icharatidzira ruzhinji rwezvino zviripo zvekushanya uye zvekuenda zvinoratidzwa
Iyo Saudi Tourism Authority (STA) uye ITB India vakazivisa Saudi sePamutemo Partner Nyika yeITB India 2021.
Iyo yekutanga ITB India Virtual Chiitiko, inoitwa musi wa7 - 9 Kubvumbi 2021, ndeyegore negore B2B yekutengesa show uye musangano wakanyatsogadziriswa kuvaka bhiriji kumusika wekuIndia neSouth Asia wekufamba.
Saudi Tourism Chiremera iri basa rekusimudzira kuziva Saudi, iyo chaiyo imba yeArabhiya, senzvimbo yekuenda. Sangano rakanangana nekuvandudza kudyidzana nevatengesi vekutenderera pasirese, kuwedzera kusvika kweyekushanya kweSaudi kupihwa uye kutyaira kutendeuka mumisika yakakosha sosi.
"Iyo Saudi Tourism Authority iri kuvaka nharaunda yepasirese yakazvipira kutyaira kuziva kweSaudi senzvimbo yakasarudzika yekushanya inopa zviitiko zvechokwadi zveArabhiya kune vanoongorora tsika kubva pasirese," akadaro Fahd Hamidaddin, Chief Executive Officer weSTA.
"Pfuma yekuenda kwenzvimbo dzenhaka, nzvimbo dzayo dzemadhorobha dzine simba uye mutsa wevanhu veSaudi zvinoita kuti ive nzvimbo inokwezva kune vafambi vanotsvaga nyaya nyowani, dzisingatarisirwi dzinoita kuti rwendo rukanganike zvechokwadi."